Ibhakede le-Excavator, i-Excavator ripper, i-Excavator coupler esheshayo - i-MINYAN
excavator MINI IBHAKHI
excavator EPHAKATHI IBHAKAZI
Mayelana NATHI yini elandelayo?
Xuzhou Minyan Import & Export Co., Ltd., etholakala edume kunazo imishini yokwakha edolobheni Xuzhou, China. ibhizinisi elizimele le-hi-tech elihlanganisa ukwakhiwa, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwe-EXCAVATOR ROCK BUCKET, i-EXCAVATOR EARTHMOVING BUCKET, i-EXCAVATOR SIEVE BUCKET, i-BUCKET WETHE, i-EXCAVATOR RIPPER, i-EXCAVATOR COUPLER esheshayo, imikhiqizo yethu ifanele zonke izinhlobo zamamodeli we-excavator. Njenge-CAT, i-XCMG, i-KOMATSU, i-BOBCAT, i-SHANTUI, i-HYUNDAI… Asilokothi siyeke ukuthuthuka, sifuna ukuba ngabaphambili kulo mkhakha, ukuze sibe ngumkhiqizi othembekile we-Excavator Bucket Manufacturer. Sibheke phambili ekusebenzeni nawe!
Ikhwalithi yokuqala, intengo yokuqala, isikweletu kuqala
Sakha ikakhulukazi zonke izinhlobo zebhakede le-excavator, njengebhakede iMini, ibhakede lomhlabathi, ibhakede ledwala, ibhakede lesikrini, i-coupler esheshayo, amazinyo ebhakede nezinye izingxenye ezigugile nezidabukile ezilungele i-excavator. Futhi singakhiqiza zonke izinhlobo zamabhakede we-excavator ahlukile ngokuya ngezidingo zakho. Amabhakede ethu we-Excavator afanisa umshini nomsebenzi futhi anikeze ukusebenza okuhle kakhulu kuhlelo lwakho lokusebenza. Noma ngabe yinkwali, indawo yokwakha noma ukwakheka komhlaba - Amabhakede ethu e-Excavator agxila ekusebenzeni ngokuphelele komshini kulowo msebenzi owenziwayo futhi awuqede kahle umsebenzi. Siyakwamukela uphenyo singaqinisekisa intengo ephansi kakhulu ngekhwalithi ephezulu kakhulu.